Momba anay - Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd.
Ataovy miaraka ny zava-drehetra.
Fampidirana ny vanim-potoanan'ny Sh
Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 1990 tany Shanghai, Sina. Amin'ny maha-mpamatsy mpanamboatra volamena anao, dia nanao famokarana sy varotra kasety adhesive nandritra ny 30 taona. Miaraka amin'ny laboratoara matihanina mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra ny akora rehetra sy ny vokatra vita ary manome toky avo lenta ho an'ny mpanjifa anatiny sy ivelany.
Ny vokatra varotra mafana an'i Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd. dia misy: kasety famehezana BOPP baoritra, fantsom-pirinty miatrika roa sosona, kasety makiazy Nano, kasety akrilika VHB, kasety PE foam, kasety EVA, taratasy fampiasa rano. kasety, kraft gummed tape, kasety fandokoana an'ny mpanao hosodoko, kasety fiberglass filament, fantsom-bokotra varahina vita amin'ny fantsom-boaloboka, fantsom-boaloboka vita amin'ny aluminium, fantsom-baravaran-jiro elektrika PVC, fantsom-boasary fanodinana PE, kasety fampitandremana fampitandremana PE, kasety barricade pvc, fantsom-pitafon'ny duck vita amin'ny lamba, LLDPE Plastic Ahinjiro horonantsary famonosana, pe sary hosodoko fim, fametahana lakaoly mafana HMA ary afaka manome tolotra logo natokana ho an'ny pirinty OEM. Namidy tamin'ny firenena sy faritra 40 manerantany izy ireo ary nahazo fankasitrahana lehibe.
Maninona no mifidy anay?
1) Mpanamboatra horonantsary matihanina izahay any amin'ny faritra fanondranana mandritra ny 30 taona
2) Miaraka amin'ny laboratoara matihanina mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra ny akora rehetra sy ny vokatra vita ary manome kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifa.
3) fanamarinana: ROHS, CE, UL, SGS, ISO9001, REACH.
4) Fifandraisana haingana. Ekipa serivisy Newera Sales normative manaitaitra
5) Afaka manome serivisy namboarina OEM.
Orinasa any Shanghai
1 Cap Famokarana tsipika famokarana: 3.000.000 metatra toradroa / volana
2,Ora nanomezana: Miasa miaraka amin'ny antoko fitaterana marin-toerana sy miasa i Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd. izay manome fifamoivoizana an-tsambo natokana ho an'ny rivotra sy an-dranomasina.
3, Fitaovana famokarana hafarana avo lenta: Ketera fanehoan-kevitra,Milina firakotra
Rewind Machine, Machine manapaka, Milina manapaka maty, Milina fonosana fonosana.
Teknolojia, famokarana ary fanandramana
Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd. dia manana fitaovana 20 isan-karazany, ary ny vokatra isan'andro dia afaka mahatratra 100 000 metatra toradroa. Izy io dia novolavola tsy tapaka ary nitarina ho vokatra 14, anisan'izany ny vokatra efa vita maherin'ny 100 ary horonana jumbo mihoatra ny 30 vita amin'ny antsasany.
Shanghai Newera Viscid Products Co., Ltd. dia manome serivisy fiatoana iray, izay mitsitsy fotoana sy ezaka ho an'ny mpanjifa.
Fanaraha-maso kalitao: Miaraka amin'ireo mpanara-maso QA / QC tsy miankina amin'ny tsipika famokarana.
Masinina fanandramana: Masinina fanadinana solosaina, Tester maharitra maharitra , Adhesive Tester, Digital Viscometer.
Ny tantarantsika momba ny fampandrosoana
Orinasa miorina any Shanghai, Sina
Fampidirana sary sy fidirana amin'ny varotra
R&D dia nahomby tamin'ny andiam-panadinana 14
Topazo ny 30% amin'ny tsena eropeana
Sokafy ny tsena fanondranana any amin'ny firenena maherin'ny 40 manerana an'izao tontolo izao
Mipetraka ao amin'ny mpamatsy volamena Alibaba
Omeo andian-tsarimihetsika iray fonosana matihanina mijanona iray hamoronana fonosana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana.
Ny fahamendrehana miasa amin'ny mpanjifa, mamorona kalitao tena mahomby, mizara ary mandresy.
Manomeza kalitao avo lenta sy serivisy tsara ho an'ny mpanjifa manerantany.